TOP NEWS: Dhageyso Yuusuf Dabaged oo Fariin Culus u diray Guddiga Doorashada Dadban iyo Habka loo soo….. | Kismaayo24 News Agency
Thursday September 22, 2016 - 4:47 under Somali News by Tifaftiraha K24
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay soo xulida Xildhibaanada Baarlamanka ee ka Imaanaya Gobolka Hiiraan iyo in Guddiga Doorashada ay Yimaadaan Beledweyne si Halkaasi ay Howshooda ay uga bilaabaan.
Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in Guddiga Doorashooyinka Gobolka Hiiraan ay qasab ku tahay in ay yimaadaan Gobolka Hiiraan.
Dhinaca Yuusuf Dabageed ayaa shaaciyay in aysan Aqbali doonin In Xamar lagu xulo Xildhibaano Baarlaman oo Matalaya Gobolka Hiiraan wuxuuna sheegay un ay qasab tahay in Xildhibaanada Gobolkaasi ka Imaanaya in Beledweyne lagu soo xulo oo Halkaasi laga soo Magacaabo.
Wuxuu sheegay in aysan wakiil ka Noqon doonin Gobolka Hiiraan Xildhibaan laga soo xulay Xamar maadama buu yiri Beledweyne ay tahay xarunta gobolka Hiiraan Reer Hiiraana ay doonaayan Xildhibaanada ka imaanaya Gobolka in Beledweyne lagu soo xulo.
Halkaan Hoose ka Dhageyso Codka Dabageed